Ụgbọ elu ụgbọ elu ọhụrụ n'etiti Newark Liberty na Reagan National na United ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ụgbọ elu ọhụrụ n'etiti Newark Liberty na Reagan National na United ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
United ụgbọ elu CRJ-550
Ọrụ ụgbọ elu United ọhụrụ n'etiti ọdụ ụgbọ elu New York/Newark Liberty International na ọdụ ụgbọ elu Reagan ga-arụ ọrụ ụbọchị asaa n'izu, yana ụgbọ elu 18 na-enye ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ elekere n'etiti elekere isii nke ụtụtụ ruo elekere iri nke ụtụtụ.
United na-ekwupụta usoro ụgbọ mmiri ọhụrụ n'etiti ọdụ ụgbọ elu Newark Liberty na Reagan National malite na Ọktọba 31 yana CRJ-550 nwere klas abụọ.
United na-eme njem 32 kwa ụbọchị n'etiti mpaghara NYC na DC, mmụba 78% yana ụgbọ elu ụgbọ elu ọ bụla.
Ụgbọ elu United niile si NYC ga-eji ụgbọ elu abụọ klaasị, gụnyere 737 MAX-8 ọhụrụ na CRJ-550 jet.
Ụgbọ elu United States na-eme njem n'etiti New York City na Washington DC ka ọ dị mfe ma dị mfe karị, na-ekwupụta taa na ọ ga-amalite ọrụ ụgbọ ala ọhụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa n'etiti. New York/Newark Liberty International Airport na Reagan National Airport na Oct. 31, ma na-agbakwụnye ụgbọ elu ise ọhụrụ n'etiti ọdụ ụgbọ elu LaGuardia na Washington Dulles Airport. Na mkpokọta, United Airlines ga-arụ ọrụ gbasara ụgbọ elu 32 kwa ụbọchị n'etiti mpaghara NYC na DC, mmụba 78% yana ụgbọ elu ụgbọ elu ọ bụla ọzọ.
United Airlines na-enyekwa ndị ahịa ya New York City nkwalite: malite na Ọktoba 31, ọpụpụ ụgbọ elu niile si na ya. New York/Newark Liberty International Airport, John F. Kennedy International Airport na LaGuardia Airport ga-agụnye nhọrọ nke mbụ, gụnyere 737 MAX-8 na CRJ-550 - ụgbọ elu mpaghara mpaghara 50 mbụ nke ụwa nwere oche na ihe eji enyere ndụ aka. United ga-enye ndị ahịa nọ na New York City ihe karịrị oche 7,000 karịa, karịa ụgbọ elu ọ bụla ọzọ, yana nke kachasị n'akụkọ ihe mere eme nke ụgbọ elu.
"Site n'ịfefe mbara igwe, ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ site na mpaghara New York City, ọ bụghị naanị na anyị na-enye ndị ahịa anyị mgbanwe na nhọrọ mana anyị na-ebuga ahụmịhe a pụrụ ịdabere na ya na nke kachasị elu," Ankit Gupta, Onye isi oche onye isi oche nke ụlọ kwuru. Planning na United Express.
"Ndị ahịa anyị bụ ndị na-eme njem mgbe niile n'etiti Washington, DC na New York agwala anyị na ha ji ịdị mma na nkasi obi kpọrọ ihe karịa ihe niile, United na-agba mbọ ịnye ọkwa dị elu nke ha na-arịọ."
United's CRJ-550 bụ ụgbọ elu mpaghara nwere oche iri ise mbụ n'ụwa emere iji nye oche na ihe eji enyere ndụ aka nke mbụ. Emebere ya ka ọ nọrọ ọdụ 50 gbakwunyere ndị njem, nhazi CRJ-70 nke United na-ebuli nkasi obi ndị ahịa.
Ọrụ ụgbọ ala ọhụrụ nke United n'etiti New York/Newark Liberty International Airport na ọdụ ụgbọ elu mba Reagan ga-arụ ọrụ ụbọchị asaa n'izu, yana ụgbọ elu 18 na-enye ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ elekere n'etiti 6AM na 10PM, ugboro ugboro karịa ụgbọ elu ọ bụla ọzọ. United Airlines ga-agbakwa ụgbọ elu ise kwa ụbọchị n'etiti ọdụ ụgbọ elu New York/Newark Liberty International na ọdụ ụgbọ elu Washington Dulles. Ụgbọ elu ọhụrụ n'etiti ọdụ ụgbọ elu LaGuardia na ọdụ ụgbọ elu Washington Dulles ga-eweta ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu kwa ụbọchị ruo itoolu ma nye ọrụ na-agbanwe agbanwe ụbọchị asaa n'izu n'etiti 6AM na 10PM.